AJA ဗီဒီယိုစနစ်များသည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာ amplifier အသစ်ကိုပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Aja ဗီဒီယိုစနစ်များနယူးဖြန့်ဖြူး Amplifier Presents
Aja ဗီဒီယိုစနစ်များနယူးဖြန့်ဖြူး Amplifier Presents
ယင်း၏ 1993 စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် lineup သို့ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်ခွင့်ပြုခဲ့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းကိုဖြတ်ပြီးမူထူးခြားတဲ့နည်းပညာနှင့်အတူဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပြုစုသူမိတ်ဖက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းကမီဒီယာကုမ္ပဏီများ, ကွန်ယက်များ, ထုတ်လွှင့်, Post-ထုတ်လုပ်မှုအိမ်များ, မိုဘိုင်းထရပ်ကားအော်ပရေတာ, ရုပ်ရှင်အယ်ဒီတာများ, ရိုက်ကူးရေး, စသည်တို့နှင့်အတူ, အယုံကြည်စိတ်ချရ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် Aja ဗီဒီယိုစနစ်နည်းပညာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မှီခိုပါပြီ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာသူ့ဟာသူ prides အရည်အသွေးမြင့် desktop ပေါ်ကဗီဒီယိုကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ကနေအထိ:
Professional က 4K ကင်မရာများ
ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံဖမ်း devices များ
ဗီဒီယိုကို router များ
Frame က synchronous နှင့် scalers
Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ အဆိုပါပေးပို့များအတွက်လူသိများသည် အကောင်းဆုံး desktop ပေါ်ကဗီဒီယိုကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ကများလွှတ်ပေးရေးနှင့်အတူတဖန်ပြုတော်မူပြီ KUMO 6464-12G.
အဆိုပါ KUMO 6464-12G ဆိုတာဘာလဲ
အဆိုပါ KUMO 6464-12G ကြောင်းလမ်းကြောင်းအားလုံးရလဒ်မှတစ်ခုတည်း input ကိုတတ်နိုင်သမျှအနေနဲ့တတ်နိုင်ဖြန့်ဖြူးအသံချဲ့စက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ KUMO 6464-12G 4x 12G-SDI သွင်းအားစုများနှင့် 6x နှင့်အတူ 3G-SDI / 1.5G-SDI / 64G-SDI / 12G-SDI များအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကျစ်လစ်သိပ်သည်း 64RU ပရိုဖိုင်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအနေဖြင့်ပိုမိုကြီးမား configurations ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သောတစ်ခုတိုးလာစွမ်းရည်ပေးခွငျးဖွငျ့ဤတာဝန်စုံ 12G-SDI ရလဒ်။
6464 နှင့် 12k ပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်အဆိုပါ KUMO 4-8G
အဆိုပါ KUMO 6464-12G အဆိုပါ 8k နှင့် 4K နှိုင်းယှဉ်ခံရဖို့ဖြစ်လျှင် /UltraHD Workflows, အဲဒီနောက်ခြောသိသိသာသာပြိုင်ဘက်အဖြစ်ထွက်မတ်တပ်ရပ်မယ်။ အဆိုပါ KUMO 6464-12G ရဲ့ 12G-SDI 4K ပို့ဆောင်သည့်အခါ cable ကိုပြေးလျှော့ချနေစဉ်အတွင်း router များကြီးမား format နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမြင့်မားသည် frame နှုန်း (HFR) နှင့်နက်ရှိုင်းသောအရောင်ကို formats ထောကျပံ့နိုငျ /UltraHD တစ်ခုတည်း SDI link ကိုကျော်။ Multi-link ကိုဂိုဏ်းထိန်းချုပ်မှုရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် Aja ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု-သက်သေပြ KUMO 8 router ကို၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံကိုထင်ဟပ်နေချိန်တွင် KUMO က CP နှင့် CP2 သုံးပြီးကွန်ရက်က-based နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူဆုံးဖြတ်ချက်တွေ 6464K မှတက်တဲ့လမ်းကြောင်းစွမ်းရည်ကမ်းလှမ်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ရိုးရှင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းများမှာ KUMO 6464-12G က 8K နှင့် 4K ညီမျှ Workflows ပေးဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့မျိုးစုံဖြန့်ချိချဲ့စက်များများ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ကိုက်ညီနိုင်ပါတယ် /UltraHD.
26 နှစ်ပေါင်းအဘို့, Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ အနာဂတ်-အထောက်အထားလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဗီဒီယိုပညာရှင်များသည်ကကူညီပေးခဲ့ကြပြီထုတ်လွှင့်နည်းပညာများအဖြစ် format နဲ့စံချိန်စံညွှန်းများအတွက်တိုးတက်မှုထောက်ခံခဲ့သည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့များစွာသောနှင့်အတူဤအမှုကိုစီရင် KUMO ထုတ်ကုန်, ထို KUMO 6464-12G မျှချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရွယ်အစား, စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်စွမ်းရည်၏ချိန်ခွင်လျှာ post ကိုအဆောက်အဦနှင့်မိုဘိုင်းကုန်တင်ကားများအတွက်အရေးပါသောအချက်များဖြစ်ကြသည်ဘယ်မှာမဆိုဇာတ်လမ်းအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ KUMO 6464-12G အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, ထို့နောက်ထုတ်စစ်ဆေး www.aja.com/products/kumo-6464-12g.
B & H ၏ Full-Frame Camera System သည် Extrodinary Imagery ကိုဖမ်းယူသည် - မေလ 15, 2020
4K ကင်မရာများကို Aja Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဒစ်ဂျစ်တယ် converters ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံဖမ်း devices များ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု kumo 6464-12g MStar SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကို Capture အကဒ်များ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-29
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လုပ်မှုအထူးကု - Entry Level